by Qiu GUI စု
အဘိဓါန် Mandarin- တရုတ်ဖြစ်ပါသည် တရားဝင်ဘာသာစကား ပြည်မကြီးတရုတ်နှင့်ထိုင်ဝမ်၏, ထိုသို့စင်္ကာပူနှင့်ကုလသမဂ္ဂ၏တရားဝင်ဘာသာစကားတစျခုပါပဲ။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးကျယ်ပြန့်-ပြောပြီ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ် တစ်ခါတစ်ရံ "စကား" တစ်ဦးအဖြစ်ရည်ညွှန်းပေမယ့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများနှင့်ဘာသာစကားအကြားခြားနားအမြဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတရုတ်လျှောက်လုံးပြောပြီတရုတ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအများသောအားဖြင့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။
အဘိဓါန် Mandarin- အနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းဟောင်ကောင်ရှိပြောပြီသောထိုကဲ့သို့သောတုံကဲ့သို့အခြားတရုတ်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ, ရှိပါတယ်။ သို့မှသာသို့သော်ဤတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများအများအပြား၎င်းတို့၏တိကျမ်းစာ၌လာသည်ပုံစံများအတွက်တရုတ်အက္ခရာများကိုအသုံးမပြုကြောင်း အဘိဓါန် Mandarin- စပီကာ များနှင့် တုံစပီကာ (ဥပမာ) အပြောပြီဘာသာစကားများအပြန်အလှန်နားမလည်ဖြစ်ကြသော်လည်းအရေးအသားမှတဆင့်အချင်းချင်းနားလည်နိုင်ပါတယ်။
အဘိဓါန် Mandarin- အလှည့်အတွက်တရုတ်မြန်မာတိဘက်ဘာသာစကားအုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ဘာသာစကားများတရုတ်မိသားစု, ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးတရုတ်ဘာသာစကားများစကားလုံးများကိုအသံထွက်နေသောလမ်းကိုသူတို့အဓိပ္ပါယ်များကွဲပြားခြားနားသည်ကိုဆိုလိုသော tonal ဖြစ်ကြသည်။ အဘိဓါန် Mandarin- ရှိပါတယ် လေးခုတန်ချိန် ။ အခွားသောတရုတ်ဘာသာစကားများအထိ 10 ကွဲပြားတန်ချိန်ရှိသည်။
ဘာသာစကားကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာအဆိုပါစကားလုံး "Mandarin အဘိဓါန်" အမှန်တကယ်နှစ်ခုအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ဒါဟာတရုတ်ပြည်မရဲ့ standard ဘာသာစကားကြောင်းဘေဂျင်းစကားအဖြစ်ပိုမိုလေ့ဘာသာစကားများတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အုပ်စုရည်ညွှန်း, ဒါမှမဟုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဘာသာစကားများ Mandarin- အအုပ်စုကိုပါဝင်သည် စံအဘိဓါန် Mandarin- (ပြည်မတရုတ်များ၏တရားဝင်ဘာသာစကား) အဖြစ် Jin က (သို့မဟုတ် Jin-yu), တရုတ်နှင့်အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား၏ဗဟို-မြောက်ဘက်ဒေသတွင်ပြောပြီဘာသာစကားတစ်ခုကို။
အဆိုပါအမည် "Mandarin အဘိဓါန်" ပထမဦးဆုံးမှာ Imperial တရုတ်တရားရုံးနှင့်သူတို့ပြောသောဘာသာစကားကို၏ကဲမငျးရညျညှနျးဖို့ပေါ်တူဂီကအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဘိဓါန် Mandarin- အနောက်ကမ္ဘာ၏အများကြီးမှတဆင့်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တရုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ (Guo yǔ) 国语, (pǔ Tong Hua) 普通话အဖြစ်ဘာသာစကားကိုရည်ညွှန်း, ဒါမှမဟုတ်華语 (Hua yǔ) ။
普通话 (pǔ Tong Hua) စာသားအရ "ဘုံဘာသာစကား" ကိုဆိုလိုသည်နှင့်ပြည်မကြီးတရုတ်အတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ် "အမျိုးသားရေးဘာသာစကား" ကိုဘာသာပေးသော国语 (Guo yǔ) ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်စင်္ကာပူနှင့်မလေးရှား (Hua yǔ) 華语အဖြစ်ကရည်ညွှန်းဘာသာစကား Chinese ဆိုလိုသည်။
ဘယ်လိုအဘိဓါန် Mandarin- တရုတ်နိုင်ငံ၏တရားဝင်ဘာသာစကားများဖြစ်လာ
၎င်း၏ကြီးမားပထဝီအရွယ်အစား, တရုတ်အမြဲအများအပြားဘာသာစကားများနှင့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများရာပြည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘိဓါန် Mandarin- ဟာမင်မင်းဆက် (- 1644 1368) ၏နှောငျးပိုငျးကာလအတွင်းအာဏာရလူတန်းစားများ၏ဘာသာစကားအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
တရုတ်၏မြို့တော်ဟာမင်မင်းဆက်၏အဆုံးစွန်သောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပေကျင်းမှနန်ကျင်းမှ switched နှင့်ချင်းမင်းဆက် (1644 - 1912) စဉ်အတွင်းဘေဂျင်းတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘိဓါန် Mandarin- ဘေဂျင်းစကားအပေါ်အခြေခံသည်ကတည်းကကသဘာဝကျကျတရားရုံး၏ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်လာသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေတရုတ်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတို့မှတာဝန်ရှိသူများ၏ကြီးမားသောရောက်လာအများအပြားတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကိုတရုတ်တရားရုံးမှာပြောပြီခံရဖို့ဆက်လက်ဆိုလို။ ဒါဟာ (Guo yǔ) 国语, မန်တရုတ်အမျိုးသားရေးဘာသာစကားဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်း 1909 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။
အဆိုပါချင်းမင်းဆက် 1912 ခုနှစ်တွင်ကျဆင်းသွားသည့်အခါတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံတရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်အဘိဓါန် Mandarin- ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ (Guo yǔ) 国语 1955 ခုနှစ်တွင် (pǔ Tong Hua) 普通话အမည်ပြောင်းသော်လည်း, ထိုင်ဝမ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ခံခဲ့ရသည်။
တရုတ်ဘာသာစကားများတစုံတပါးကဲ့သို့, အဘိဓါန် Mandarin- ကိုအသုံးပြုသည် တရုတ်ဇာတ်ကောင် က၎င်း၏အရေးအသားစနစ်။ တရုတ်ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်ထက်ပိုအနှစ်တထောင်ပတ်လုံးပြန်ချိန်းတွေ့တဲ့သမိုင်းရှိသည်။ တရုတ်ဇာတ်ကောင်များ၏အစောပိုင်းပုံစံများ pictographs (အစစ်အမှန်အရာဝတ္ထုများ၏ဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုမှု) ခဲ့ကြပေမယ့်ဇာတ်ကောင်ကိုပိုမိုမှတ်သားသိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အတွေးအခေါ်များအဖြစ်တ္ထုကိုကိုယ်စားပြုသို့ရောက်ကြ၏။
တစ်ခုချင်းစီကိုတရုတ်ဇာတ်ကောင်ဟာပြောပြီဘာသာစကား၏တစ်ဦး syllable ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဇာတ်ကောင်များစကားများကိုယ်စားပြုပေမယ့်တိုင်းဇာတ်ကောင်လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုသည်မဟုတ်။
အဆိုပါ တရုတ်အရေးအသားစနစ်က အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၏အခက်ခဲဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အဘိဓါန် Mandarin- သင်ယူခြင်း ။ အဲဒီမှာဇာတ်ကောင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့မှတ်မိနှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ဖို့လေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
စာတတ်မြောက်ရေးတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းမှုမှာတရုတ်အစိုးရ၏ 1950 ခုနှစ်တွင်ဇာတ်ကောင် simplifying စတင်ခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်နှင့်ဟောင်ကောင်နေဆဲရိုးရာဇာတ်ကောင်ကိုအသုံးပြုဖို့အနေဖြင့်ဤအရိုးရှင်းသောဇာတ်ကောင်, ပြည်မတရုတ်, စင်ကာပူ, နှင့်မလေးရှားအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
အဘိဓါန် Mandarin- ၏ကျောင်းသားများ ပထမဦးဆုံးဘာသာစကားကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာတရုတ်စကားပြောနိုင်ငံများကပြင်ပမကြာခဏတရုတ်ဇာတ်ကောင်နေရာမှာ Roman ကိုအသုံးပြုပါ။ Roman ပြောပြီအဘိဓါန် Mandarin- များ၏အသံများကိုကိုယ်စားပြုအနောက်တိုင်း (ရောမ) အက္ခရာကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်ပြောပြီဘာသာစကားသင်ယူခြင်းနှင့်တရုတ်ဇာတ်ကောင်များ၏လေ့လာမှုစတင်အကြားတံတားဖြစ်ပါတယ်။
အများအပြား Roman ၏စနစ်များ, ဒါပေမယ့်သင်ကြားရေးပစ္စည်းများများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး (နှင့်ဤ website တွင်အသုံးပြုသောစနစ်) ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည် Pinyin ။
သင်ယူအဘိဓါန် Mandarin- တရုတ်များအတွက် Rosetta Stone®ဘာသာစကားများ Software ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အီတလီတွင် Count မှလေ့လာပါ
မိသားစုများ၏ Concept ကိုမှ Related ဂျပန်ဝေါဟာရ
ဂျပန်ဝါကျမှာ "kedo" ကဘာလဲ?
Yao အဘိဓါန်များနှင့် Hui အသုံးပြုခြင်းအဘိဓါန် Mandarin- အနာဂတ်
TOCFL - နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဖြစ်တရုတ်များ၏စမ်းသပ်ခြင်း
ယင်းအဖြစ်များသည့်ပြင်သစ်စကားထူး '' Avoir du နာကျင်မှု sur la Planche '' ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပုံပြင်: 'ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေပတေရုသ' '
ဂျပန်အသံအဘိဓါန် - တစ်ဦးက
( 'Buy မှ') ပုံမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Acheter '' Conjugating
ဘယ်လို Spinosaurus ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလော
တက်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုပထမ Preacademic ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်
တဖန်မောရှေအား - ပညတ်တရား၏အသက်ပေး
System Tray ထဲမှာနေရာယူခြင်း Delphi Applications ကို
Reader ကိုမေးခွန်း: ငါဘယ်လိုအတည်ပြုပြီးပြီ Get သလား?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los 10 mejores estados မသန်စွမ်း hacer negocios en အမေရိကန်နိုင်ငံက y los 10 ပေဂုရ
အဘယ်အရာကိုသို့မဟုတ်အဘယ်သူ Cantor ပါသလဲ
တစ်ဦးနှောင့်နှေး Lede ၏အဓိပ္ပာယ် - Feature ကိုစာရေးဆရာနှောင့်နှေး Ledes ကိုသုံးပါကဘယ်လို
တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းအဆိုးဆုံးစတင်ခြင်းလက်စွဲ '' em Hold
ဘယ်လို Dynamic Form အကဲဖြတ်ကျောင်းသားသင်ယူ Improve နိုင်သလား
ဂေါက်ကွင်းတစ်ဦး '' ကောင်းမွန်သော Ballstriker '' ဆိုတာဘာလဲ
1812 ၏စစ်ပွဲ: မြေယာအပေါ်ပင်လယ်ပြင် & Ineptitude မှာအံ့အားသင့်စရာ
အဆိုပါ Pros နှင့် Block အချိန်ဇယား၏ Cons
Preposition Phrase အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
အဆိုပါကြောက်မက်ဘွယ်သော 3-ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်: ဘယ်လိုမကြာခဏ Pros ဒါဟာလုပ်ပါနဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်
ဂျင်မ် Dine ၏ပုံစံအတွက် Abstract နှလုံး Paint
အကောင်းဆုံး Beginner Pingpong ရော်ဘာများ